Micromax Archives - Page9of 10 - Technology Khabar
इन्टरनेटको लागत विश्लेषण गर्न समिति गठन, यस्तो छ अध्ययनका विषयहरु
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नयाँ शाखा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा
ह्वाट्सएपमा एउटा म्यासेज अब पाँच पटक भन्दा फवार्ड गर्न नपाईने
सस्तो स्मार्टफोन माइक्रोम्याक्स क्यानभास एक्सप्रेस
२१ मंसिर २०७१, आईतवार ०६:४५	Comments Off on सस्तो स्मार्टफोन माइक्रोम्याक्स क्यानभास एक्सप्रेस
काठमाण्डौं, २१ मंसिर । भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी माइक्रोम्याक्सले एक नयाँ र सस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । माइक्रोम्याक्सले ४.५ इन्चको स्क्रीन भएको क्यानभास एक्सप्रेस (Canvas Xpress) स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । यो फोन एन्ड्रोयडको किटक्याट अपरेटिङ सिष्टममा आधारित छ । नयाँ स्मार्टफोनको प्रोसेसर १.३ गीगाहर्ज क्वाड कोर रहेको छ । यो फोनमा दूई वटा सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ भने ...
१२ मंसिर २०७१, शुक्रबार ०९:३९	Comments Off on सामसुंग स्मार्टफोन भारतीय बजारमा पहिलो रोजाईमा
काठमाडौं, १२ मंसिर । इन्टरनेशल डाटा कर्पोरेशन (आईडीसी) ले भारत एशियामा स्मार्टफोनको लागि सबैभन्दा तिब्रगतिले बढिरहेको बजार भएको जनाएको छ । आईडीसीका अनुसार अहिलेसम्म भारतीयहरुका लागि सामसुंग मनपरेको स्मार्टफोन कम्पनी हो । यहि आधारमा सामसुंग भारतीय बजारमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । विहिवार सार्वजनिक गरेको आईडीसीको अन्तिम त्रैमासिक रिपोर्टका अनुसार बिक्रेताहरुले लगभग २३.३ मिलियन स्मार्टफोन बिक्री गरेका छन् । बिक्री ...
२७ कार्तिक २०७१, बिहीबार ०६:४८	Comments Off on माइक्रोम्याक्सको नयाँ ‘क्यानभास निट्रो’ बजारमा
माइक्रोसफ्ट ब्राण्डको पहिलो फोन ‘लूमिया ५३५’
२३ कार्तिक २०७१, आईतवार ०८:५८	Comments Off on माइक्रोसफ्ट ब्राण्डको पहिलो फोन ‘लूमिया ५३५’
काठमाडौं, २३ कात्तिक । माइक्रोसफ्ट लूमिया ५ एक्सएक्स सीरीज विण्डोज फोनमा सबैभन्दा बढि बिक्री हुने मोडल हो । यहि लोकप्रिय सीरीजमा माइक्रोसफ्टले नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्न लागेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गर्न लागेको लूमिया ५३५ (Lumia 535) स्मार्टफोनको तस्वीर तथा फीचर्स लीक भएको छ । यो फोन माइक्रोसफ्टको निकै सफल फोन लूमिया ५३० पछि बजारमा आउन लागेको हो । यो ...
माइक्रोम्याक्स ‘क्यानभास ५’ मा ‘क्यानोगेनमोड फार्मवेयर’ अपरेटिङ सिष्टम
५ कार्तिक २०७१, बुधबार १२:२५	Comments Off on माइक्रोम्याक्स ‘क्यानभास ५’ मा ‘क्यानोगेनमोड फार्मवेयर’ अपरेटिङ सिष्टम
काठमाडौं, ५ कात्तिक । भारतीय मोबाइल कम्पनी माइक्रोम्याक्सले छिटै नै आफ्नो नयाँ फोन ‘क्यानभास ५’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । माइक्रोम्याक्सको ‘क्यानभास ४’ यसअघि भारतयि बजारमा निकै रुचाईएको थियो । क्यानभास ५ लाई लिएर इन्टरनेटमा ग्राहकहरुमा निकै रुची देखिएको छ भने यो फोन लन्च हुनुभन्दा पहिले नै क्यानभास ५ को फीचर्स लिक भएको छ । समाचार अनुसार माइक्रोम्याक्सको क्यानभास ५ ...
Micromaxको Modem Support भएको CDMA फोन बजारमा
२४ भाद्र २०७१, मंगलवार ०६:२५	1 Comment
काठमाडौँ, २४ भदौ । Micromax ले नयाँ फोन Miromax C210 नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा मोबाइल फोनको क्षेत्रमा Micromax ले आफुलाई अग्रणी स्थानमा राख्न सफल भएको छ । यस नयाँ Miromax C210 मा निकै शक्तिशाली CDMA नेटवर्क रहेको छ र यसको CDMA नेटवर्कको आवाजको उच्च गुणस्तरको रहेको दाबी कम्पनीको छ । आधुनिककालको मागलाई मध्यनजर गर्दै यस Micromax C210 मा Digital ...
१७ भाद्र २०७१, मंगलवार १२:३०	Comments Off on माइक्रोम्याक्सले भारतमा एप्पललाई पछाडी पार्यो
काठमाडौं, १७ भदौ । स्मार्टफोन बजारमा आफ्नो पकड मजबूत बनाएपछि भारतीय माइक्रोम्याक्सले ट्यावलेट बजारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । ट्याबलेट बिक्रीको मामलामा माइक्रोम्याक्सले विश्वप्रशिद्ध कम्पनि एप्पललाई पनि पछाडी पारेको छ । इन्टरनेशनल डाटा कर्पोरेसन (आइडीसी) को तर्फबाट सोमबार जारी गरिएको आँकडा अनुसार सन् २०१४ को अप्रिल–जुनमा भारतीय टेयाब्लेट बजारमा १४ प्रतिशतको बजार हिस्सासँगै एप्पललाई पछि धकेल्दै माइक्रोम्याक्स दोस्रो स्थानमा ...
माइक्रोम्याक्सको बोल्ट A064 बजारमा
१६ भाद्र २०७१, सोमबार ०६:०२	Comments Off on माइक्रोम्याक्सको बोल्ट A064 बजारमा
काठमाडौं, १६ भदौ। माइक्रोम्याक्सले माइक्रोम्याक्स बोल्ट ए064 बजारमा ल्याएको छ । एण्ड्रोइडको किट क्याट ४.२.२ अपरेटिङ सिष्टम रहेको यो मोबाइलमा ३.५ इञ्चको स्क्रिन छ । यो स्क्रिन यस्तै अन्य फोनको तुलनामा उत्कृष्ट भएको कम्पनीको दाबी छ । यसमा रहेको १ दशमलव ३ गिगाहर्जको डुअल कोर प्रोसेसरले यसको क्षमता बढाएको छ । यसमा ४ जीवीको रोम छ । यसमा एलईडी फ्ल्यास ...
इन्टरनेटमा बढेको कर बारे संचार मन्त्रीसँग छलफल गर्दै व्यवसायीहरु, घट्ला त शुल्क ?
१५ पटक झर्दापनि मोबाइलको डिस्प्ले सूरक्षित हुने, कोर्निंगले सार्वजनिक गर्यो गोरिल्ला ग्लास सिक्स
सिटिजन्स बैंकले पायो ‘बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०१७’
गूगललाई यूरोपेली संघद्धारा ५ विलियन डलर जरिवाना, यस्तो अारोप लगाईयो
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १९:५२
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १८:४३
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १७:५८
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १३:०३
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १२:४५
३ श्रावण २०७५, बिहीबार २०:०३
३ श्रावण २०७५, बिहीबार १३:३८
३ श्रावण २०७५, बिहीबार १३:०२
अब यूट्यूबमा पनि ह्यासट्यागको सुविधा, भिडियो खोज्न सहज हुने https://t.co/8bdzAwnp3B4hours ago
इन्टरनेटको लागत विश्लेषण गर्न समिति गठन, यस्तो छ अध्ययनका विषयहरु https://t.co/m7AF7e0g7M5hours ago
मोबाइल एपको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएकाको तथ्याङ्क संकलन https://t.co/tsBkpZC65y 11 hours ago
ह्वाट्सएपमा एउटा म्यासेज अब पाँच पटक भन्दा फवार्ड गर्न नपाईने https://t.co/VzRiqvoTNI 11 hours ago
इन्टरनेटमा बढेको कर बारे संचार मन्त्रीसँग छलफल गर्दै व्यवसायीहरु, घट्ला त शुल्क ? https://t.co/1A4xERg9R0 2018/07/19
१५ पटक झर्दापनि मोबाइलको डिस्प्ले सूरक्षित हुने, कोर्निंगले सार्वजनिक गर्यो गोरिल्ला ग्लास स https://t.co/RsDVP9PzOU 2018/07/19
गूगललाई यूरोपेली संघद्धारा ५ विलियन डलर जरिवाना, यस्तो अारोप लगाईयो https://t.co/bJYht12gcy 2018/07/19
शाओमी एमआई मिक्स थ्री चीनमा सार्वजनिक, ६.९ इन्च डिस्प्ले र ५,५०० एमएएचको ब्याट्री https://t.co/NRqcbtGiOk 2018/07/19